NEXT Music 3.7.3.7690 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.7.3.7690 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား ဂီတ NEXT Music
NEXT Music ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျဂီတအတွက်လာမည့်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်ရှိရာအကြီးမားဆုံးကို virtual ဂီတပွဲတော်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစွမ်းဆောင်မှုကိုဖမ်းသို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကို၏စည်းချက်မှထိပုတ်ပါ။ ပေါ့ပ်အနေဖြင့်လက်တင်, EDM မှနျ Classical ရန်, တိုင်းဂီတပရိတ်သတ်များအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
ကို virtual အဆင့်ရာပေါင်းများစွာအကြား Surf, တစ်ဦးပြပွဲဖမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုအောင်နှင့်အခြားဂီတပရိသတ်များနှင့်အတူ chat ရန်။ သငျသညျသစ်ကိုအနုပညာရှင်နှင့်အသစ်ဂီတရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်အောင်နေ့တိုင်းကျွန်တော်သစ်ကိုပြပွဲပါရှိပါတယ်။ သင်ပင်သင်၏မေတ္တာအနုပညာရှင်တွေကို virtual လက်ဆောင်တွေပို့ခြင်းအားဖြင့်ပြသနိုင်သည်!
TI, ရိုင်ယာကယ်ရီ, NGHMTRE နှင့်များစွာသောပိုပြီးတူသောအနုပညာရှင်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးအပေါ်၌ထိုင်။ သင့်ရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးမေးခွန်းများကိုတိုက်ရိုက်မေးပါများနှင့်အခြားပရိသတ်များနှင့်အတူ chat ။
သငျသညျတခုစွဲငြိဖွယ်ရာဂီတအတွေ့အကြုံကိုအသစ်သီခငျြးမြား၏စည်းချက်မှကိုအသာပုတ်သကဲ့သို့, ကို virtual ဂစ်တာပေါ်ထွက် Rock ။ သင်နောက်ဆုံးရနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံး hits play နိုင်အောင်လစဉ်လတိုင်း, ငါတို့အသစ်သောသီချင်းတွေကိုထည့်ပါ။
အမြန်ဆုံးလက်တို့ကိုသူတွေ့မြင်ရန် duel မှသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ဂီတပရိတ်သတ်တွေသန်းပေါင်းများစွာကိုစိန်ခေါ်မယ်။ ဦးဝင်းဆု, ကွှားပွောအခွင့်အရေးများဝင်ငွေနှင့်သင်ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးစိုးသွားအဖြစ်သင်၏နာမကိုဦးဆောင်သူကိုတက်စောင့်ကြည့်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆုံးစွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုသင်္ဘောသားနှင့်အတူရေးအဖွဲ့ထ! အဆိုပါလေယာဉ်အမှုထမ်းသီချင်းအပေါ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသည်အခြားသမားတွေကိုစိန်ခေါ်မယ်။ အဘယ်သူ၏နာမနှင့်အလံဟာလေယာဉ်အမှုထမ်းဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကြည့်ဖို့ကထွက်တိုက်ဖျက်။
ဒါဟာအကြီးမားဆုံးကို virtual ဂီတပွဲတော်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂီတပရိသတ်များနှင့်အတူ party ဖို့အချိန်ပါပဲ။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://nextmusic.com/tos
NEXT Music အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NEXT Music အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
NEXT Music အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
NEXT Music အား အခ်က္ျပပါ
lmbs62 စတိုး 89 251.36k
NEXT Music ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း NEXT Music အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.7.3.7690
ထုတ်လုပ်သူ PennyPop US
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://beatfever.com/privacy
Release date: 2019-09-19 20:51:45
လက်မှတ် SHA1: 27:2F:DD:FC:E2:DC:42:E5:B0:16:B8:F6:29:20:D9:06:ED:D7:29:24
အဖွဲ့အစည်း (O): MIR Partners Inc
NEXT Music APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ